DAAWO: ”Soomaaliya waxay u duntey Soomaali Galbeed darteed” | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DAAWO: ”Soomaaliya waxay u duntey Soomaali Galbeed darteed”
DAAWO: ”Soomaaliya waxay u duntey Soomaali Galbeed darteed”
(Minneapolis) 14 Okt 2018 – Waxaa dalka Maraykanka lagu qabtay munaasabad ay soo abaabuleen haweenka Soomaali Galbeed oo sida la yiri lagu taageerayay maamulka Somali State oo metela dhulka Soomaaliyeed ee haatan hoos taga Itoobiya.
Yeelkeede, haweenkan ayaa dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ugu baaqay inay midoobaan oo gacmaha is qabsadaan, waxaana shirka gacan wayn ka gaystay Cadar Kaahin iyo Hibo Nuura oo ah laba qof astaan u ah fanaaniinta Soomaaliyeed ee taageera midnimada iyo wanaagga umadda Soomaaliyeed.
”Somalia waxay u duntey Soomaali Galbeed darteed, waayo markii ay isku dayday inay dhulkaa xoreeyso burburkeedu kama horreeynin ee qofkii aan horay u ogaynoow haddaba ogoow,” ayay tiri Cadar Kaahin.
”Diyaar ma u nahay inaannu halganka Soomaalinnimada wadno oo ay weliba haweenku ka qayb qaadanayaan?” ayay Hiba Nuura kasoo qayb galayaashii waydiisay.
Hoos ka daawo muuqaalka oo dhan.
Previous articleTUUGSI TABAYSAN: Muxuu ilmahaasi had iyo goor u hurdayaa? Ma aaminaysid qisadan! (Qaybtii 4-aad)
Next articleMAXAY KA QABTAAN? SHAKI laga muujiyay ciidamada Maraykanka ee kusii faafaya dalal ay Somalia ka mid tahay! (Qaybtii 1-aad)